Umatshini weBattery weLiFePO4, abaThengisi -iTshayina abaThengisa ibhetri baseChina
Isiphelo sendlela yokuGcina iLithi yeBattery yeseli yeLifepo4 3.2V 105Ah
Ukutshaja kwakhona i-PLM-105A 3.2V 105Ah ibhetri isebenzisa ezona zinto zibalulekileyo zinamandla aphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri egcwalisekayo ye-Prismatic LiFePO4 48V 12Ah ibhetri yeBoat, Inqwelo, Isikhululo soMbane, i-Weeder
Ibhetri ye-PLM-12A 48V 12Ah eyakhiwe kwakhona isebenzisa ezona zixhobo zibalaseleyo ezinomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ukutsha kwakhona kweCylindrical LiFePO4 Ibhetri 26650 3.6V 5Ah Iseli yebhetri yeSithethi seBluetooth, iithoyi, itotshi yombane, i-E-bhayisekile
Ukutshaja kwakhona i-PLM-26650 3.6V 5Ah ibhetri isebenzisa ezona zinto zinamandla kunye nomthamo ophezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ukutsha kwakhona kweCylindrical LiFePO4 Ibhetri 14500 3.7V 800mAh Iseli yebhetri yeSithethi seBluetooth, iithoyi, Clock
Ukutshaja kwakhona i-PLM-14500 3.7V 800mAh ibhetri isebenzisa ezona zinto zinamandla kunye nomthamo ophezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri egcwalisiweyo yeCylindrical LiFePO4 32700-4S 12.8V 6Ah Ibhetri Pack ye-High-voltage Grid Security Equipment System
Ibhetri ye-PLM-32700-4S eyi-12.8V 6Ah isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
3.2V 10Ah Umjikelo oNjiweyo weLithium Li-ion Ibhetri 38120S / LiFePO4 Iibhetri eziThengiswayo
Ibhetri ye-PLM-38120S 3.2V 10Ah eyakhiwe kwakhona isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ukuboniswa kweLCD ye-48 Volt enokuhlaziywa kwakhona kwi-Li ion yeLithium 48V 200AH Lifepo4 I-Solar Telecom Pack yeBMS kunye netshaja
Ibhetri ye-PLM-200A 48V 200Ah eyirejista isebenzisa ezona zixhobo zibalaseleyo ezinomgangatho ophezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri egcwalisekayo ye-Prismatic LiFePO4-3 ibheji ye-24V / 36V / 48V 50Ah / 60Ah / 80Ah ibhetri yesitulo seBoat, Inqwelo, Isikhululo soMbane, i-E-bus
Ibhetri ye-PLM-LiFePO4-3 24V / 36V / 48V ye-LiFePO4-3h isebenzisa izixhobo ezilungileyo kakhulu ezinomgangatho ophezulu kakhulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri egcwalisiweyo ye-Prismatic LiFePO4 ye-48V 100Ah ibhetri yeBoat, Inqwelo, Isikhululo soMbane saMandla
Ibhetri ye-PLM-100A 48V 100Ah eyirejista isebenzisa ezona zixhobo zingcono kakhulu ezinesikhundla esiphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
I-Prismatic yoGcino lweSolar Lithium Battery Cell Lifepo4 48V 25Ah
Ibhetri ye-PLM-25A 48V 25Ah enokuphinda isebenze yeyona nto ibaluleke kakhulu enesikhundla esiphezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri eqhubayo yeCylindrical LiFePO4 32650 3.2V 6Ah Iseli yebhetri yesithethi seBluetooth, iithoyi, i-Electric Torch, i-E-bike.
Ukutshaja kwakhona i-PLM-32650 3.2V 6Ah ibhetri isebenzisa ezona zinto zinamandla kunye nomthamo ophezulu kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.
Ibhetri egcwalisekayo yeLiFePO4 eyiBhetri eyi-3.2V 26Ah Iseli yebhetri yesikebhe, Inqwelo, i-E-bhayisekile
Ibhetri etsha ye-PLM-26A 3.2V 26Ah isebenzisa eyona nto inomgangatho ophezulu onokubakho kubathengi abaqhelekileyo. Ii-oda ze-OEM / ze-ODM zesiko zamkelekile kwisicelo esahlukileyo, ishishini lethu eligubungela imarike yeYurophu, iAsia kunye neMelika. Silindele ukuba ube liqabane lakho lwexesha elide e China.